Ahoana ny fanamboarana freshener ho an'ny menaka manitra ny trano | Bezzia
Ahoana ny fanamboarana freshener ho an'ny menaka manitra mandoro ny trano
Toñy Torres | 09/10/2021 16:00 | Ataovy ny tenanao, an-trano
Ny fanaovana freshener ho an'ny rivotra manitra hanosotra ny trano dia haingana sy mora kokoa noho ny toa azy. Amin'izay mba afaka manitra ny tranonao ianao amin'ny fofona tianao indrindra, tsy mila mampiasa vokatra simika ary tsy manaja ny tontolo iainana. Ny fananana fofona tsara any an-trano dia tena ilaina mba hahafahanao mankafy ny fahatsapana ny fiadanan-trano ao anaty trano madio sy milamina.
Mba hahatratrarana izany dia maro ny tetika an-trano, toy ny manana voninkazo vaovao, mpanadio rivotra voajanahary ho an'ny efitrano tsirairay, kitapo lamba misy voninkazo maina ho an'ny lalimoara, ankoatry ny safidy maro hafa. Toy ity hevitra ity hamoronana freshener rivotra matanjaka izay azonao ampiasaina roa hanosorana ny trano, toy ny vatasarihana na valizy anatiny. Satria tsy misy zavatra tsy mahafinaritra kokoa noho ny akanjo sarobidy fa misy fofona ratsy.
1 Fanamafisam-peo mahery, ahoana no anaovana azy?
1.1 Miaraka amin'ny savoka anana
1.2 Fomba fanaovana freshener amin'ny rivotra matevina miaraka amin'ny jelly
Fanamafisam-peo mahery, ahoana no anaovana azy?
Ny mpanadio rivotra madio dia tsy inona fa ny savony savony taloha, fa tsy ampiasaina hanasana lamba, dia ampiasaina aromatize ny trano na ny arimoara. Mba hamoronana ireo savony manitra na mpanadio rivotra mahery ireo dia mila savoka legioma ianao hamoronana ireo fitaovana matevina. Na dia misy safidy hafa aza mora kokoa, haingana sy mora kokoa, gelatin. Atorinay anao ny fomba fanamboarana rivotra madio amin'ny lafiny roa, mba hahafahanao manandrana mamorona zavaboarinao manokana handotoana ny tranonao.
Miaraka amin'ny savoka anana
Mba hamoronana freshener rivotra an-trano mafy orina dia mila mampiasa savony soja ianao, izany hoe vokatra ankoatry ny fanaovana tanana, vegan izy io. Raha ny momba ny akora ampiasaina hanatrarana ny ranomanitra dia azonao atao ny misafidy ny menaka esansiela raha toa ka 5% ny vola ampiasana amin'ny savoka. Raha te hampiasa menaka botanika ianao dia 10% ny isan-jato raha ny habetsaky ny savoka anana ampiasaina. Ireto ny fitaovana ilainao ilaina mamorona freshener vita amin'ny savoka vita amin'ny legioma vita an-trano.
100 gr savoka soja
menaka manitra na botanika safidinao
lasitra ny sylicon
Tsotra be ny fizotrany ary tsy hitondra anao mihoatra ny 30 minitra. Ny lakileny dia ny mampiempo ny savoka soja, dingana tsy maintsy atao amin'ny hafanana ambany. Rehefa miempo tanteraka ny savoka, ampianay ny fatra ilaina amin'ilay hanitra voafantina. Tadidio fa raha mampiasa menaka esansiela ianao dia tsy maintsy manampy 5% ary raha menaka botanika io dia 10% raha ampitahaina amin'ny savoka soja 100gr.
Afangaro amin'ny sotro hazo ary afangaro tsara ireo fangaro. Manaraka, araraka ao anaty lasitra silika ny fangaro. Zava-dehibe ny anaovan'izy ireo an'io fitaovana io mba hialana mora amin'ny lasitra ny takelaka fanamafisam-peo. Raha te handravaka ny freshener-nao ianao dia tsy mila manampy ravina potpourri vitsivitsy, ravina maina, hazo kanelina na hodi-kazo. Avelao hangatsiaka sy hivaingana tanteraka ny fangaro Alohan'ny hamonosana sy ny voila, dia efa manana mpanadio rivotra an-trano mavesatra ianao handotoana ny tranonao.
Fomba fanaovana freshener amin'ny rivotra matevina miaraka amin'ny jelly
Ity safidy hafa ity dia tsotra toy ny teo aloha ihany ary ny dingana dia mitovy. Ny maha samy hafa azy dia ny gelatin ny akora ampiasaina hahazoana zavatra matanjaka. Ireto misy ny dingana manaraka, aloha mila mampangotraka rano iray kapoaka isika, miaraka amin'ny valopy misy gelatin tsy miandany ary sira sotro efatra. Rehefa mangotraka ny fangaro dia esory amin'ny afo ary ampio rano mangatsiaka iray kaopy.
Amin'ity fotoana ity dia hanampy ny menaka manitra voafantina isika, mila menaka manidina 10 na 15 nilatsaka. Ary mba manana loko miloko koa ilay freshener air solid, dia hanampy fandokoana sakafo roa latsaka. Araraka ao anaty kaontenera fitaratra ny fangaro, toy ny siny yogourt, siny mason kely, na siny fitaratra misy ao an-trano. Raha vantany vao mangatsiaka ny fifangaroana dia ho mafy ny gelatin ary hanana freshener rivotra an-trano mety tsara hapetraka ao amin'ny trano fidiovana ianao na amin'ny zorony kely ao an-tranonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ahoana ny fanamboarana freshener ho an'ny menaka manitra mandoro ny trano
Fanatanjahan-tena tongotra 4 hatao ao an-trano